ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးညမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြောပြလာတဲ့ နီနီခင်ဇော် – MMYC
ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးညမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြောပြလာတဲ့ နီနီခင်ဇော်
December 21, 2020 - by Shein
နီနီခင်ဇော်ကတော့ ဂီတလမ်းကြောင်းမှာအောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒိုင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ ရဲ့ Season3ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ Team RZN ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် N Oo L ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နီနီကတော့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ N Oo L ကို ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Final ညမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပုံဖော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “နီနီရွေးပေးတဲ့ နဂါးနီ နဲ့ သီချင်းတိုင်းကို ပုံဖော်သီဆိုပေးတဲ့ ခင်ခင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ခင်ခင့်ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းဆီကိုလည်း ကျေးဇူးပါတယ်.ကျမတို့ကြိုးစားတာတွေ အသိအမှတ်ပြုပေးလို့ကျေးဇူးပါရှင်.သူ့ဘဝရှေ့လျှောက်မှာပိုဝန်းရံပေးပါ.ခင်ခင်ဆိုတဲ့သီချင်းဟာကျမရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဂီတအမျိုးအစားမဟုတ်တဲ့ အတွက် ပိုလို့ကြိုးစားစီစဉ်ပေးရပါတယ်.Semi Final ပြီးကထဲက တရက်မှမနား ခင်ခင်ဟာဆိုင်းပညာကို နေ့ ည သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်. ကျမမောင်းသမျှ ဆရာမောင်းသမျှ မညည်းမညူလုပ်ပေးရှာပါတယ်.
ခင်ခင့်ကို နဂါးနီသီချင်း ဆိုင်း သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ music arrangement လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ရွာစားကိုထက်အာကာကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်.. ပွဲစဉ်တလျှောက်တီးခတ်ပေးသော Lucky Hand.အရင် week တွေက Music producer လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Ko Myo Zaw Htet ,Mentor လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Ko Kyaw Thiha Dressတွေအပင်ပန်းခံချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Mama Ma Pont , Photo KMA Kyaw Myo Aung , Makeup Ma Htet, Jewellery Aung Thamardi , ဆိုင်းပညာရှင်များ, တကယ်ကိုကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar နှင့် MRTV4 Team အဖွဲ့သားများမိသားစုများ အားလုံးကျေးဇူးပါရှင့်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်း “တစ်နိုင်ငံလုံး အကုန်အကျခံပီး ခင်ခင့်ကိုရော ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကို Vote ပေးကျလို့ ကျေးဇူးပါ။ ကျမတို့ နည်းပြတွေလည်း အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးကြပီး ပရိသတ်တွေရဲ့ 100 % Vote ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပါပဲရှင် … အားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ရှင်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ နီနီနဲ့အတူ ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးကတော့ မြန်မာဝတ်စုံအနီရဲရဲကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး ရွေးချယ်ထားတဲ့သီချင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်နေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေ…
Source : NiNiKhinZaw,CRD-Cele Gabar
Previous Article သားလေးမွေးဖွားပြီး သားကိုပေးတဲ့နာမည်ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၆၀)စာ ဒိုမီနိုပီဇာအခမဲ့စားခွင့်ရခဲ့တဲ့ မိသားစု
Next Article USဆီကသတင်းတွေရဖို့ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်ပြီးရင်းခဲ့တဲ့ တရုတ်သူလျှို အမျိုးသမီး